मलद्धार नभएको बच्चा जन्मिएपछि आमाले भनिन्ः मैले के पाप गरेकाे थिएँ र, हे भगवान! - Khabar Time
काठमाडौ, २७ जेठ– आठबर्ष अघि दाङ्गको अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरीहुँदा लक्ष्मी योगीले छोरीको मलद्धार छैन भन्ने पत्तै पाइनन् । नर्मल डेलिभरी भएकी उनलाई चिकित्सकहरुले पनि बच्चाको मलद्धार छैन भन्ने कुराको सामान्य जानकारी समेत गराएनन् । बच्चाको मलद्धार छैन भन्ने चिकित्सकलाई नै जानकारी थिएन । यसअघि एक छोरा र छोरीलाई जन्मदिइसकेकी लक्ष्मीले कहिल्यै शंकासम्म गर्न सकेकी थिइनन की मलद्धार नभएको बच्चा जन्मिन्छ भन्ने ।
तस्विर : आशिष पौडेल
काठमाडौको ग्रिनसिटी अस्पतालमा आईतबारको भेटमा गहँभरि आँशु बनाउदै उनले आफनो दुखेसो पोखिन,–‘जन्मिएको तीनदिनको दिन छोरीको मलद्धार छैन भन्ने थाहा भयो, त्यस समय त म बेहोँस नै भए, होसमा आउन चिकित्सकोमा नै जानुप¥यो ।’ नानी धेरै रुन थालेपछि नन्द गोमा योगीले बच्चालाई काखमा लिइन् र अतांलिदै भनिन्, भाउजु छोरीको त मलद्धार नै छैन विगत स्मरण गदै लक्ष्मीले सुनाइन् । श्रीमान् शिवहरी योगी मलेसियामा थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको उनीहरुको परिवारमा आर्थिक भार झन थप बढ्यो ।
दिशा गर्न नसक्ने छोरी जन्मिएको थाहा भएपछि लक्ष्मीले बच्चा जन्मिएकै अस्पतालमा छोरीलाई तीन दिनको दिन लगिन् । चिकित्सकहरुपनि अचम्ममा परे, जन्मिएको सात दिनको दिन नाइटोको देब्रो साइटमा चिरेर दिसा निकालियो । तपक्क आँशु खसाउँदै लक्ष्मीले भनिन,–‘सानो नानीको मलद्धार नै नभएपछि पेट चिरेर दिसा निकाल्दा कति रोँए कति त्यसको त सीमा नै छैन । गाउँलेहरु सबै हेर्न आए मलद्धार नभएको पनि बच्चा जन्मिदो रहेछ भन्थे उनीहरु अनौठो मान्थे तर मलाई भने भित्र भित्रै औडाहा हुन्थ्यो, देखाउन नपरे हुन्थ्यो जस्तै भयो, अहिले सम्मपनि बच्चालाई लुगा खोल्दै पेटको दिसा निस्कने दुलो देखाउनुपर्दा निक्कै पीडा हुन्छ ।’
अहिले छोरी रविना योगी आठबर्षकी भईन् । अझैपनि उनलाई आमा लक्ष्मीले एकछिन आँखाबाट ओझेल पर्न दिन्नन् । खेल्न हिड्न खोज्छिन् तर रविनालाई प्रायले छिः छि दुरदुर नै गर्छन् । सामान्य तवरले जसरी दिसा आउनुपर्ने हो , त्यो नआएपछि उनको पेटमा जतिखेरपनि प्वाल टाँलिने गरि सेतो कपडा कम्मरमा बेरेर राखिने गरेको रहेछ । लामो सुतिको टालोलाई कम्मरमा फन्को बेरेर बच्चालाई सधै राखिदियोे अनि दिसा लागेपछि फेरिदिने गर्दिरहिन आमा लक्ष्मीले । दिसा आएको बच्चालाई थाहा हुँदैन । कतिबेला त्यो टालोमा दिसा लाग्छ अनि पटक पटक गरेर दिनको पाँचपटक सम्म टालो फेर्नेगरेको आमा लक्ष्मीले सुनाइन् । रुँन्चे स्वरमा लक्ष्मी भन्छिन्,–‘ कम्मर भरिको सफा सुतिको टालो लगाइदियो, दिसा लागेपछि निकालिदियो ,फेरि अर्को टालो लगाइदियो, दिनमा चारपाच पटमसम्म टालो फेर्दे यस्तरी नै आठबर्ष बितिसक्यो । मैले के पाप गरेर यस्तो भोग्नुपरयो भन्ने लाग्छ । जो लेखेको छ त्यही भोग्नुपरयो भन्ने लाग्छ । ’
नाइटोको देब्रे साइडको छेउको प्वालबाट दिसा निकाल्नकै लागि भएपनि उनी जति खेरपनि बच्चाको वरिपरी हुन पर्यो । बच्चा स्कुल जान औधी रमाइलो मान्छिन् तर कस्ले गरिदिन्छ यस्तो स्याहार । जति खेरपनि फोहोर निस्कन्छ भन्दै आफन्त नातेदार साथीभाइले नै छिछि दुरदुर गर्छन्, उनले थपिन । त्यही भएर भान्जापर्नेको स्कुलमा बच्चालाई पढन् राखेको छु उनले दुखेसो पोखिन् ।
जस्तो भगवानले दिएको छ त्यो त स्याहार्न परयो नी हैन ? जसले मलाई यस्तो उस्तो भन्दै छिःछि दुरदुरगर्छन् । उसैले भोग्नु परोस भन्छु, मलाई पनि त रहर त थिएन नी यस्तो बच्चा जन्माउन हैन ? मलिन अनुहार बनाएर लक्ष्मीले भनिन् । उ सँगैका अरु केटाकेटी खेल्छन् , रमाउछन् मेरो छोरी खुल्ला रुपमा खेल्न पाउदैन भनेर पिडा हुन्छ । बा घाउमा कसैले चलाइ दिन्छन की, बच्चा लडेर त्यो प्वालमा झनै समस्यापो आउछ की भन्ने मात्रै ध्यान भईरहन्छ । जहाँ पायो त्यही दिसा आउछ घरमा आउँदा फोहोर हुन्छ भन्छन् आफन्त पनि त्यति आउदैनन् ।’
लक्ष्मीले निन्याँउरो अनुहार बनाउदै भनिन् ‘यस्तो बच्चा कहिल्यै देखेको पनि थिएन, सुनेको पनि थिएन अहिले आफैले भोग्न प¥यो । समाजमा कतिपयले दिसागर्ने ठाउँ नै नभएको छोरी पाइछ भनेर खिसि ट्युरीपनि गर्छन ।’ जन्मिएको सात दिनदेखी शुरुभएको रविनाको अपरेशनको कहानी अझै सकिएको छैन । यसबीचमा बुटबल, पाल्पा, काठमाडौमा पटक पटक गरि पाँचपटक सम्म बेहोस बनाउदै अपरेशन गर्दा पनि उनको अपरेशन सफल हुन सकिरहेको छैन बाबु शिबहरीले बीचैमा थपे ।
अहिले भने अलिकता आशा पलाएको उनले सुनाए । जेठ ६ गते ग्रिनसिटी अस्पताल काठमाडौमा ५ घण्टा लगाएर नानीको अर्को शल्यक्रिया गरिएको छ । आमा लक्ष्मी र बाबु शिवहरीलाई अझै पनि ढुक्क भने हुन सकिरहेका छैनन तर अस्पतालले विश्वास दिलाएको छ अबको ६ महिनामा बच्चाले अन्य बच्चाको जस्तै सामान्य तरिकाले दिसा गर्न सक्छिन भनेर । आमा लक्ष्मी भन्छिन, यदि चिकित्सकहरुले भनेजस्तै बच्चाले सामान्य तरिकाले दिसा गर्न सक्यो भने म यो अस्पताल र यहाँका चिकित्सकलाई भगवान मान्छु ।
नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकतालाई जोगाउने गरी नै गुठी विधेयक ल्याइएको छः मन्त्री अर्याल